Dawladda oo laba safiir u magacaabi doonto - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dawladda oo laba safiir u magacaabi doonto
La daabacay onsdag 24 februari 2016 kl 11.28
Dawladda ayaa dhowaan ku magacaabaysa safiir ku hawl leh dhimista hubka nukliyeerka iyo mid ku shaqo leh xuquuqda binaadanka. Ka dambe ayaa dembiyada jinsi amba diin naceebka loo galo ku shuqul leh, ayey sheegtay Wallström.
Warbixintan ayaa ka mid aheeyd waxyaabaha ay wassirka arrimaha dibada, Margot Wallström, ay maanta ku soo bandhigtay barlamaanka.
Dhanka kale ayey xisbiyada mucaaradka, alliansen, ku tallinayaan in ay Iswiidhan mid ka noqoto gashanbuurta Nato, fikirkan oo ay Wallström la qeeybsaneyn xisbiyadan.
-Sababta u waddankeenu nabad u yahay ayaa xidhiidh la leh in aanan ku jirin Nato, ayey sheegtay.
Cimilada caalamka ayaa isaguna ka mid ah waxyaabaha ay Wallström maanta ka hadshay. Wexey u jeeda in sida dagaalada aduunka hadda ka dhacaya khatar u yihiin, ayey cimiladu, qaxa aduunka ka socda, iyo fidinta cudurada khatar u tahay.
Wallström ayaa u jeeda in ay muhim u tahay waddamada xubnaha ka ah EU in Ingirisku ku hadho isbahaysigan.
-Maquul mahaa in ay wadamada qaar qaabisho 60 milyan qaxooti ee hadda wadamadooda ka soo qaxaya, halkey qaari deyr qodax leh dhisaan.
Wexey raacisay in ay muhiim tahay in EU wadahadal la gasho waddanka Turkiga sii loo xalliyo qaxootiga faraha badan ee Yurub soo gaadhay. Dhanka kale ayey ka welwelsantahay xaalada beryahaan Turkiga ka taagneeyd oo ka soo horjeeda bayaanka xuquuqda binaadanka ee qaramada midoobay.
Wallström ayaa dhaleecaynaysa waddanka Ruushka oo sida ay iyadu u sheegtay si sharco darro ah u qabsatay Krim, militari na ku meeleysay bariga Ukraain. Arrinkan ayaa khatar ku ah amaanka yurub, ayey sheegtay.
Islamarkaas ayey ka soo horjeeda weerarka u maamulka Assad iyo Ruushku hadda ku hayyo mucaaradka Suuriya.
Qaramada midoobay. Wallström ayaa doonaysa in ay Iswiidhan ka mid noqoto goolaha amaanka.
-Waa in goolaha amaanku masuuliyadeeda ka soo baxdo, hasayeeshe ilkihii aan ka suugayey ayey yeelan weeyday. Sababta aanu haysano goolaha amaanka ayaa ah in ay ka hor tagaan dagaalada aduunka ka socda, ayey tidhi.